CZI Yokurudzira Bhajeti Rinotambirwa neVarombo
Mbudzi 23, 2010
Sangano remubatanidzwa wemaindasitiri, reConfederation of Zimbabwe Industries, CZI, riri kukurudzira hurumende kuti kana yoparura hurongwa hwemashandisirwo emari yegore rinouya, inge iine varombo mupfungwa.
Sangano iri rinoti kana hurumende ikabuda nezvisungo zvine varombo pamwoyo, izvi zvinozobatsira pakumutsiridzwa kwemabasa nekusimudzirwa kwehupfumi hwenyika.
Kurudziro yeCZI iyi inoteverawo kurudziro yakaitwa nerimwe remasangano evashandi reZCTU, yekuti hurumende ibude nebhajeti inorerutsira vanoshaya.
Gurukota rezvemari, VaTendau Biti, vari kutarisirwa kutura hurongwa hwemashandisirwo emari mugore ra 2010 muparamende neChina svondo rino. Hurumende inonzi iri kutarisirwa kushandisa mari inoita madhora mabhiriyoni maviri nechidimbu gore rinouya.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, uye vachishanda vakazvimirira, VaCharles Mutasa, vanoti mamiriro akaita nyaya dzezvematongerwo enyika munyika pamwe nezvigadzirwa zvinobva kunze kwenyika zvine mitengo yakaderera, zvimwe zvezvinhu zviri kukanganisa kusimukira kwemaindasitiri.